Ukuthumela imiyalezo ngeselula kuza ngamandla! | Martech Zone
Ukuthumela imiyalezo ngeselula kuza ngamandla!
NgoMgqibelo, ngoMeyi 3, 2008 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
I-Wirefly muva nje wenze i-poll yabasebenzisi befoni ephathekayo futhi uthole ukuthi ama-64% wabasebenzisi beselula abayisebenzisi imiyalezo. Ngenkathi ngiphenya ngalokhu okuthunyelwe, ngamangala ukuthi amasayithi ambalwa abekhona eshaqile by izinombolo.
Mhlawumbe ngingumsebenzisi osekhulile kunamanye ama-blogger aphawule, kepha empeleni ngamangala ngesizathu esiphikisayo. Kwangimangaza ukuthi abasebenzisi abangama-65% empeleni wenza sebenzisa imiyalezo. Mhlawumbe kumane nje ukuthi sengineminyaka engama-40 ubudala kodwa… ngempela? Lokho kufana nokwethuka ukuthi abasebenzisi befoni abangama-35% abakaze basebenzise umshini we-telegraph.
Amaphesenti wabasebenzisi bomakhalekhukhwini abathumeli imiyalezo ngoba bathole ukuthi bangakwazi empeleni khuluma kulelo bhokisi elincane elisebenzisekayo isikhathi sangempela nomuntu ngakolunye uhlangothi. Futhi akudingeki ukuthi bacindezele izithupha zabo ukwenza kanjalo. Vele, ukuthumela imiyalezo kungasiza uma ufuna ukwehlukana nothile kepha ungafuni ukukhuluma nabo.
Ngiyabhuqa impela, ngiyathanda ukuthumela imiyalezo. Izingane zami zibhalela abangane bazo imiyalezo engapheli futhi ngiyabonga lapho bengithumelela imiyalezo emhlanganweni kunokuba bangishayele ucingo. Ukuthumela imiyalezo akulula kakhulu futhi kushesha ngokushesha. Futhi kuyanda.
Amabhizinisi abenenkinga yokuthi enzenjani ngeselula isikhashana manje. Impikiswano embonini yensizakalo yokudla yindlela abaxhasi abaphendulayo abenza ngayo kumakhuphoni asuselwa kumbhalo nezixwayiso. Ngihlangane no-Adam Small, uMongameli we Umbhalo ngesicelo, namhlanje ekuseni kanti u-Adam ubhale inkondlo ngezinto ezithokozisa ngokweqile ezisehlelayo.
Umbhalo ngesicelo usuvele unokusetshenziswa okuthile okuthakazelisayo kweselula. Omunye wabo unikeza abasebenzisi beMarathon isikhathi sabo sokuphela ngokubathumelela umbhalo enombolweni yabo yokubhalisa. Akunasidingo sokulinda uze ufike ekhaya ukubheka isikhathi kwi-PC yakho!
U-Adam uqhubeke wachaza i-SMS vs. MMS. Kuphi SMS (Insizakalo Yemiyalezo Emifushane) ivumela izinhlamvu zombhalo eziyi-160 ukuthi zithunyelwe emuva naphambili, MMS (I-Multimedia Messaging Service) ivumela izithombe, ividiyo nomsindo ukuthi zithunyelwe emuva naphambili.
Njengoba abahlinzeki beSelula beqhubeka nokwenza ngcono amanethiwekhi abo ngejubane (isb 3g, ihunyushwe = isizukulwane sesithathu) nomakhalekhukhwini bayaqhubeka nokwenza ngcono izikrini zabo ngezinqumo eziphakeme, lokhu kungavula imakethe ngempela!
Esikhundleni sokuthumela umyalezo ku Phusha izinhlanzi ngesidlo sasemini, mhlawumbe ungathumela ividiyo emfushane evela kumphathi osemsebenzini noma ividiyo enhle yesitsha uqobo! Futhi ungadlulisa isigqebhezana esenziwe ngokwezifiso usebenzisa ubuchwepheshe bamuva bebhakhodi ukuze umthengisi akwazi ukumane azulise umfundi phambi kwefoni ukuze ahlenge isigqebhezana.
U-Adam wabelane nami ngobuchwepheshe obengeziwe obungemnandi engingenayo imvume yokwabelana lapha (okwamanje), kodwa ngibheke phambili ekuboneni nasekusebenziseni.
Ingabe ukuthumela imiyalezo kufanele kube Mahhala?
Ngabuza u-Adam ukuthi ngabe ucabanga ukuthi amanani entengo azoshintsha yini ekuthumeleni imiyalezo lapha e-United States (ukuthumela imiyalezo phesheya kwezilwandle kuvame ukuba mahhala) futhi wathi akathembi kanjalo. Ukubheka umthamo wegaxekile kubhokisi lakho lokungenayo kuchaza ukuthi kungani… uma ukuthumela imiyalezo kungabizi mali, izingcingo zethu bezizogcwala njengoba sikhuluma!
Tags: ukumaketha amaselulai-sms yeselulaSMSukumaketha i-smsukumaketha imiyalezoukuthumela imiyalezo
Iningi Lokuthunyelwe Kwami Kubhulogi liyiVerbose
May 3, 2008 ku-11: 58 PM
Yebo, yize ngingomunye walaba bantu abadala kakhulu futhi angiyisebenzisi iselula ngaphandle kokubhala umbhalo - kuwusizo njengesizotha esingadingi umamukeli ukuthi ayeke ukusebenza futhi alalele, lapho ngazi ukuthi abasibo eduze nedivayisi ye-imeyili…
May 4, 2008 ku-6: 55 AM
Uma inkampani yakho igxile kokuqukethwe kweselula noma i-IM, ungafuna ukuthi ucwaningo lwakho lubonise ukusetshenziswa okuphansi kwemiyalezo. kodwa izinombolo zakamuva kakhulu ezivela ku-CTIA, inhlangano yamazwe engakhethi buso ikhombisa ukuthi kwabanikazi bezingcingo base-US abayizigidi ezingama-262, bangaphezu kwezigidi eziyi-176. Ngaphezulu kuka-400,000 ngomzuzu nje e-US.
Imiyalezo ethunyelwa e-US ikhula ngesilinganiso esingu-151% minyaka yonke, kanti abaneminyaka engama-30 kuya kwengama-45 ubudala bakhula ngesilinganiso esingu-130%.
Abathathu kuphela abahlinzeki abakhulu baseMelika njengamanje abavumela iMMS eningi futhi iningi labadlali abakhulu bagxile ekwandisweni kwemakethe yabo yokufinyelela idatha ngenxa yezinselelo zokulethwa kwe-MMS, engaphansi kuka-3%.
Okuqukethwe okufinyeleleka ngedatha kuyikusasa lokumaketha kwamaselula, kepha i-SMS yokuxhumana okumsulwa kanye nenombolo yezinhlelo zokusebenza ezitholakala ngombhalo iyaqhubeka nokukhula.
Njengamanje cishe ama-50% wezingcingo zase-US zinamandla wedatha kepha cishe kuphela ama-30% akhokha imali eyengeziwe yokwenza kusebenze isici.
May 4, 2008 ku-3: 52 PM
Izibalo ezinhle, Rbowen! Ngiyabonga kakhulu ngokuthatha isikhathi sakho ukwabelana ngalezi zibalo. Bengilokhu ngigqigqa inetha ukuthola ukuthi ngikwazi ini ngesihloko. Ukuthumela imiyalezo nakanjani kune-buzz, kepha kusabonakala kunezindlela zokuthola ukutholwa okujwayelekile kwezentengiso. Mhlawumbe lona unyaka!